Date: 08 juillet 2016 - 17:08
Trop be loatra ny fampifilafilana ataon'ny mpiasa ao amn'io domaine io à commencer par le grand chef zay indraindray hilaharana adin'ny 6 vao voaray raha voaray ary tsy ao amin'ny biraony lava.
Sinon, Misy agent iray koa ao manao ny ataony amin'ny fanambaniana usager, merci S itra ka!
Tokony jeren'ny bianco akaiky ny toe-javatra ao fa tena MIJALY ny vahoaka o
Re: domaine atsimondrano
Date: 11 juillet 2016 - 14:13
Date: 13 juillet 2016 - 17:11
TSy aleonao ve manome 20.000 Ariary dia voaray eo no ho eo toy izay hijaly adiny 6 hiandry ?
Date: 13 juillet 2016 - 18:36
potimoty> Hay tenisany mihitsy ilay mpanao tsolotra ao ? toriako any amin'ny amin'ny bianko eo tena fa ataovy
Date: 13 juillet 2016 - 19:47
trop kosa aloha e, zany anaovan-dry zareo an'ireny tambanivohitra ao reny zany, asainy miverina foana fa tsy vitainy mintsy ny taratasy, nefa efa antitra sady mafy ady an.
Date: 21 juillet 2016 - 18:09
Na ianao mandoha vola dia miresaka aminao ry zareo, nefa kosa tsy hoe mandoa vola dia mandeha ho azy a, misy foana ny fampifilafilaina anao.
Na moa zany ianao mahantra dia na am 2025 aza tsy misy miraharaha anao ao
Ekeko mihitsy hoe le oe S i TRAKA io tena grave an
Date: 24 juillet 2016 - 00:15
Tsy tàndàlana intsony ny teo Madagascar.Raha tena nanao ny asany ny bianco, tsy ho nisy mihitsy io rehetra tantaraina eo ambony io sns etsy sy eroa manginy fotsiny. Misy an'izany hoe samy fonctionnaire zany.
Date: 03 juillet 2017 - 13:37
tenA mila fanadiovana mihitsy ao amin'o domaine Atsimondrano io fa mampijaly vahoaka,haindry zareo mihitsy izany hoe ROVITRA NY BOKY ,TSY HITA NY BOKY kanefa iza no hanimba izany afa-tsy ry zareo ihany ve? tsy misy olona avy ety ivelany manana fahefana amin'izany ,miangavy ny tompon'andraikitra Fanjakana hijery akaiky ana'io
Date: 03 juillet 2017 - 14:58
Mpangalatra manenjika mpangalatra ka na misy aza ireo tratra, ny tafajanona eo mpangalatra foana.